अन्तराष्ट्रिय खबर – Page3– rastriyakhabar.com
होलीमा रक्सी नभेटदा सेनिटाइजर पिए, दुईको मृत्यु
एजेन्सी । भारतको मध्य प्रदेश मा होलीमा रक्सीको अभावमा सेनिटाइजर पिउँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । अर्का एकको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । मध्य प्रदेशको चतुर्वेदी नगरको हो । यहाँका तीन जनाले होलीको पार्टीको आयोजना गरे । उनीहरुले सेनिटाइजरलाई नै पार्टीमा रौनक बढाउन रक्सीको रुपमा पिउँदा दुर्घटना घटेको..
काठमाडौं । नेपाल र ओमानका विश्वविद्यालयबीच सहकार्य गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली र त्यहाँका सुल्तान काबुस विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा फहाद अलजुलन्दा अल साइदिबीच उनको कार्यकक्षमा भएको भेटघाटमा सहकार्यको सुरुवात कृषि र पर्यटन क्षेत्रका विद्यार्थी..
जर्मनीमा कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहर, थप ३ साता लकडाउन
बुधबार, चैत्र ११, २०७७ मा प्रकाशित
काठमाडौं । जर्मननीमा थप तीन साता लकडाउन गरिएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढेपछि जर्मनीले थप तीन साता लकडाउन थप गरेको हो । इस्टर पर्वको समयमा कोरोना संक्रमण अझै बढ्न सक्ने आशंका गर्दै लकडाउन थप गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । अब जर्मनीमा १८ अप्रिलसम्म लकडाउन हुने..
बिहिबार, चैत्र ५, २०७७ मा प्रकाशित
मुम्बई। भारतीय अर्बपति व्यापारी मुकेश अम्बानी एसियाकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । सम्पतिको मूल मुल्य ८० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरसहित मुकेश अमबानी एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति घोषित भएका हुन् । ब्लुमबर्ग बिलिनियर्स इन्डेक्सको पछिल्लो सूचीमा अम्बानी सुचिकृत भएका हुन् । गत २ वर्ष यता..
मंगोलियामा धुलोसहितको आँधीबेहरीले ६ जनाको मृत्यु
उलान बाटोर । मंगोलियामा भीषण रुपमा आएको धुलोसहितको आँधीबेहरी र हिमआँधीमा परी गत एक हप्ताभित्र कम्तीमा छ व्यक्तिको मृत्यु भएको देशको राष्ट्रिय आपतकालीन व्यवस्थापन निकाय (नेमा) ले सोमबार जनाएको छ । उक्त आँधीहरुमा हराएका ५४८ जनामध्ये जना ४६७ जीवित भेटिएका नेमाले जनाएको छ । दुर्भाग्यवश, दक्षिणी..
एजेन्सी । हाम्रो देश आफैंमा बगैँचा हाे । याे प्राकृतिक रुपमा आफैं सिगारिएको छ । हिमाल, पहाड, तराई त्यसैपनि मनमोहक छटाले भरिएको छ, नेपाल । यसलाई झन् मिहेनत गरेर बनाउने हो भने के होला ? कल्पना गर्नुस् त ! तर मरूभूमिकाे देश दुबई भने मानिसहरूले सहरलाई नै बगैँचा बनाएका छन् । दुबई जाने जाेकाेही मानिसकाे..
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्गतको स्वास्थ्य समिति (Health Committee) तथा वैदेशिक रोजगार तथा कल्याण विभाग (Department of Foreign Employment and Welfare of NRNA) को संयुक्त प्रयासमा विश्वव्यापी विस्तृत टेलि–हेल्थ सेवा शुक्रबार १२ फेब्रुअरी २०२१ देखि शुभारम्भ गरिएको छ । यस टेलि–हेल्थ सेवा बाट विश्वका कुनै पनि ठाउँ मा बसोबास गर्ने नेपाली..
म्यानमारको अवस्था नियन्त्रण बाहिर
काठमाडौं । सैन्य विद्रोह पछि म्यानमारमा एक हं’गामा भएको छ । पछिल्लो जानकारीका अनुसार त्यहाँको सेनाले पार्टी नेता आङ सान सुचीको मुख्यालयमा तो’डफो’ड ग;रेको छ । यसका साथसाथै प्रहरीले पहिले प्रदर्शन गरिरहेका व्यक्तिहरू वि’रूद्ध का’रबा’ही पनि गरेको छ । विरोधलाई गैरकानुनी घोषणा गरिए पनि, मंगलबार..
एजेन्सी । चीनका राष्ट्रपति सि जिन पिङ र अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनका बीच समकक्षीका रुपमा पहिलो पटक फोन वार्ता भएको छ । वाइडेन गत जनवरीमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेपछि बिहीबार उनीहरुबीच पहिलो पटक टेलिफोन कुराकानी भएको हो । विश्वका दुई शक्तिशाली तर एक अर्काका..
ग्रीस । ग्रीसका प्रधानमन्त्री किरियाकोस मित्सोताकिसले देशका केही ठाउँमा लकडाउन घोषणा गरेका छन् । कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिँदै गएपछि न्यूनीकरण गर्न भन्दै उहाँले मङ्गलबार अत्तिका क्षेत्रमा लकडाउन घोषणा गरेका हुन्। ग्रीसका झण्डै आधा जनसङ्ख्या रहेको मानिने त्यस क्षेत्रमा थप मानवीय सङ्कट नपरोस्..
जापानमा कोभिड–१९ का कारण जारी सङ्कटकाल थप
जापानले कोभिड–१९ विरूद्धको अभियान अझै सफल भई नसकेको भन्दै आगामी मार्च ७ गतेसम्मका लागि देशव्यापी जारी स्वास्थ्य सङ्कटकाललाई बढाएको छ । जापानी प्रधानमन्त्री योशीहिदा सुगाले मङ्गलबार कोविड–१९ महामारीको कारण लगाइँदै आएको सङ्कटकाललाई थप एक महिनाको लागि विस्तार गरे । सरकारको कोभिड–१९ कार्यदलको..
एजेन्सी । म्यानमारको प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनाको विश्व समुदायले सोमबार आह्वान गरेको छ । म्यानमारको सेनाले नेतृ आङ सान सुकी र अन्य राजनीतिज्ञहरूलाई पक्राउ गरेपछि यस घटनाको निन्दा गर्दै म्यानमारमा प्रजातन्त्र पुनः स्थापनाको लागि आह्वान गरिएको हो । म्यानमारको घटनालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाले..
अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनको ट्विट फलोको पहिलो सूचीमा परिन यी सुन्दर मोडल (फोटोफिचर)
एजेन्सी । अमेरिकाको राष्ट्रपतिको पदको शपथ लिएपछि जो बाइडनलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिको औपचारिक ट्विटर एकाउन्ट प्राप्त भयो । यो एकाउन्टबाट बाइडनले १२ जनालाई फलो गरेका छन । यो सूचीमा बाइडनकी पत्नी जिल बाइडन, उपराष्ट्रपति कमला हेरिसलगायत ह्वाइट हाउसका केही अधिकारीहरु रहेका छन । बाइडनले पहिलो पटक फलो..
सपथ लिँदै बाइडेनले भने, यतिखेर हामीले लोकतन्त्रलाई बचायौं
एजेन्सी । ४६ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा जो बाइडेनले बुधवार राति सपथ लिएका छन् । सपथग्रहण समारोहमा उनले आफूहरुले मनाईरहेको उत्सव लोकतन्त्रका कारण सम्भव भएको बताए । उनले भने, “हामीले लोकतन्त्र अनमोल छ भन्ने सिकेका छौं । लोकतन्त्र कमजोर भएको छ । यो समयमा साथीहरु ! हामीले लोकतन्त्र बचायौं ।” उनले..
मलेसिया । मलेसियामा कोरोनाभाइरसबाट एकैदिनमा अहिलेसम्मकै सवैभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएका छन् । सरकारी अधिकारीहरूले बिहीबार दिएको जानकारी अनुसार एकैदिनमा तीन हजार ३३७ जना सङ्क्रमित भएका हुन् । यो सङ्ख्या महामारी सुरु भएदेखिकै सवैभन्दा धेरै भएको उनीहरुले जनाएका छन् । मलेसियामा कोरोनाका कारण..